Kurdistance… [Fijoroana Kiorda] · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2017 10:04 GMT
Nitranga tamiko ny zavatra tena mahatsiravina indrindra….ny fifamoivoizam-baovao RSS ho an'ny bilaogy Kiorda, noho tsy fisian'ny voambolana tsara kokoa…ary nanjavona avokoa ny vaovao rehetra. Ka amin'ny fiatrehana ny olana, azo antoka fa hamela olona vitsy ivelan'ny resaka ny lahatsoratra androany. Soa fa tsy very ny asako rehetra satria mbola azo jerena ao amin'ny tranonkala bilaogiko Kurdistan Blog Count ny vaovao RSS rehetra.
Ka andeha hatomboka amin'ny mahafinaritra? Nanangona rohy media mahafinaritra ho an'ny hetsika Kiorda i Vladimir ao amin'ny From Holland to Kurdista (Avy ao Holandy mankao Kiordista), manomboka amin'ny hetsika fampiratiana sary misy ireo mpitsoa-ponenena Kiorda nokarakarain'ny Doctors Without Borders hatramin'ny lahatsary fanadihadiana momba ny fitroarana Kiorda tao Diyarbakir. Fanampin'izany, azo jerena ny vaovao momba ny Hetsika Anfal an'i Saddam Hussein manohitra ny Kiorda Irakiana sy ny antsafa mahafinaritra miaraka amin'ilay bilaogera Kiorda Hiwa avy ao amin'ny Hiwa Hopes momba ny fahazazany sy ny fitomboany tao amin'ny sekolin'ny mpitsoa-ponenana.
Nanoratra momba ny tsy fahampian'ny fifantohan'ny haino aman-jery amin'ny fitsarana an'i Saddam Hussein noho ny Hetsika Anfal i Hiwa, ary koa momba ireo mpanao politika Kiorda ao Kurdistan Atsimo naneho hevitra momba ny fizarazarana tsy mitsaha-mitombo ao Iraka.
Tohizana amin'ny lohahevitra haino aman-jery, Pearls of Iraq nanoratra momba ny fanagiazana ireo boky Kiorda nalefan'i Soeda ho ao Kurdistan Avaratra (Torkia Atsimo-Atsinanana), fantatra fa hopotehin'ny fitondrana Tiorka ireo boky ireo. Save Roj TV indray nanoratra momba ny gazety Kiorda mpivoaka isan'andro izay niharan'ny herisetran'ny fitondrana Tiorka noho izy miezaka mizara ny gazetin'izy ireo ao Andrefan'i Kurdistan. Ankoatra izany, Roj TV tenany indray mbola miady amin'ny tolon'izy ireo amin'ny fitondrana Tiorka izay mikasa hanakatona ny fahitalavitra ao Danemarka. Nadanjalanja mikasika izay hitan'izy ireo fa haino aman-jery mitanila ao Torkia mikasika ny Resaka Kiorda kosa ny The-kurdistani. Ary ny namana Rasti-bini indray mampiseho ny lafin'ny haino aman-jery Kiorda sy ny valintenin'izy ireo tamin'ny herisetra Tiorka vao haingana nihatra tamin'ny vahoaka Kiorda tamin'ny anaran'ny ady amin'ny PKK.